Crocheting को नसाहरू मात्र soothe छैन, तर पनि यसको आफ्नै उत्पादन को बेहतर कुराहरू प्राप्त गर्न अनुमति दिन्छ। skilfully थ्रेड मोड र वास्तविक डिजाइनर लुगा प्राप्त Needlewoman। सबै समय मा बुना आइटम दराज आकर्षक देख्यो। openwork रूपांकनों को वस्त्र मानिसहरू र शाही व्यक्ति को महिला लुगा। नियमित जो जटिल र complemented nakida र हावा लूपहरूको छन् नयाँ डिजाइन, साथ आ। तर विशेष गरी लोकप्रिय वर्ग प्रधान विचार crocheted। तलको लेखमा यस्तो तत्व ड्राइभिङ प्रस्तुत गरिएको छ।
crochet ढाँचासँग वर्ग रूपांकनों यस लेखमा प्रस्तुत छ। तिनीहरूले कठिनाई बदलिने को हो। निस्सन्देह, एक हात मा, कारण कुराहरू सजिलै गरेका छन्। तर यो शिल्प को दोस्रो पक्ष हो। यो एक साँचो कृति सिर्जना गर्न वर्गहरूको दर्जनौं लिङ्क गर्न चाहन्छ। vyvyazat वर्ग जस्तै Needlewoman प्रधान विचार crocheted। क्षेत्रीय कुनै पनि जटिलता को हुन सक्छ। यार्न सबै remnants को यस्तो रचनात्मक प्रयोग समयमा। रंग योजना सबैभन्दा विविध छ। सबै व्यक्तिको प्राथमिकताहरू मा निर्भर गर्दछ। को पसलहरूमा तपाईं यार्न रंग र ottenokv धेरै पत्ता लगाउन हुनेछ। आयाम रूपांकनों हुक मुद्दा को मोटाइ र निर्भर हुनेछ।
सामान्यतया यो बुनना crochet वर्ग रूपांकनों समय प्रशस्त लाग्छ। योजना विवरण दृश्यहरु प्रत्येक चरण रंग विवरण। कुनै पनि वर्ग श्रृंखला टाँका एक सेट साथ सुरु हुन्छ। त्यसपछि तिनीहरूले सर्कल बन्द। अर्को, SC विभिन्न नम्बर स्तम्भहरू प्रयोग गर्नुहोस्।
एक सरल ढाँचा संग वर्ग रूपांकनों
गरेको crocheted एक सरल वर्ग प्रधान विचार विचार गरौं। योजना सजिलो खडा। तपाईं देख्न चित्रमा तपाईं आवश्यक के आवाजलाई बुनाई सुरु गर्न छ। आठ टाँका को यो गणना। अर्को राउन्ड SC बिना स्तम्भहरू र्याप छ। वर्ग एक समानुपातिक फारम भए, प्रत्येक पङ्क्तिले उठाने पाश सुरु गर्नुपर्छ। तेस्रो पङ्क्ति एक SC र पाँच हावा लूपहरूको संग स्तम्भ एकान्तरण हुन्छन्।
चौथो पङ्क्ति बाट फूल पत्रदल गठन गरिनेछ। प्रत्येक पात स्तम्भहरू को सेट, एक polustolbik एक SC एक स्तम्भ देखि बुना छ दुई nakida दुई स्तम्भहरू, हावा पाश, दुई nakida, एउटा स्तम्भ र एक SC polustolbik एक दुई स्तम्भहरू। SC बिना, प्रत्येक फूलको दल स्तम्भ बन्द गर्छ। यसलाई स्पष्ट फूल गर्दछ। अब मनसाय एक वर्ग मा संलग्न हुनुपर्छ। एक फूलको दल शीर्ष, यो के गर्न SC बिना एक स्तम्भ प्रयोग रंगरुट सात टाँका, अन्य lobe नयाँ भर्टेक्स संग संयोजन। कोण भाग नौ टाँका समावेश। nakida बांध बिना स्तम्भहरू को परिणामस्वरूप संख्या। यो नै गर्नुपर्छ। अन्तिम पङ्क्ति एक SC र एक हावा पाश संग स्तम्भ एकान्तरण, बुनना।
जटिल ढाँचाको मनसाय
निस्सन्देह, प्रभावशाली सुन्दर crocheting वर्ग रूपांकनों हेर्न। यी तत्व मा योजनाहरु थप जटिल। यस्तो ढाँचाको कार्यान्वयन गर्न हतार छैन। सजिलो संग सुरु गर्नुहोस्। लूपहरूको को बस एक सेट भन्दा बढी बुझ्न र डिकोड सर्किट जान्नुहोस्। तिनीहरूलाई प्रारम्भिक कौशल आवश्यक बाँध गर्न।
त्यहाँ थप जटिल कारणहरू छन्। तिनीहरूले संरचना को केन्द्र मा एक असामान्य छवि समावेश गर्दछ। त्यहाँ केन्द्र मा भारी फूल संग बुना छ कि ती वर्ग रूपांकनों छन्। तिनीहरूले मात्र व्यावसायिक needlewoman बुनना छन्। पहिलो पटक देखि crocheted एक कठिन वर्ग प्रधान विचार गर्न। क्षेत्रीय SC को एक वैविध्यपूर्ण रकम संग स्तम्भहरू एक सेट comprises।
छोराछोरीको रेखाचित्र संग रूपांकनों
यो अक्सर बच्चाहरु को लागि बुनाई लुगा को कारण लागि प्रयोग गरिन्छ। साथै फूल चित्रण गरिएको छ जसमा योजनाहरु संग वर्ग रूपांकनों हुक हेर्न। तिनीहरूले पूर्ण बालिका लागि कपडे र स्कर्ट मा फिट। तर यी तत्व, तपाईं आफ्नो हात सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ। शो कल्पना भने, यो वर्ग मा निष्कर्षमा सकिन्छ कुनै पनि आंकडा।
हामी तपाईंलाई एउटा प्यारा Owls, छोराछोरीको वस्त्र को सिद्ध सजावट हुने प्रस्ताव। आफ्नो बच्चा जस्तै प्रयासमा कदर हुनेछ। यी को, तपाईं आफ्नो बच्चाहरु को बेड complements एक अद्वितीय कम्बल सम्बद्ध गर्न सक्नुहुन्छ। तकियों र गलैँचाहरु पनि अद्वितीय हेर्न हुनेछ। इच्छित भने, कुनै पनि क्यारेक्टर भित्री सजावट वस्तु बन्न सक्छ। सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, वर्ग मा प्रवेश गर्न अधिकार।
को भित्री मा वर्ग ढाँचा
बुना आइटम सधैं ध्यान आकर्षित। को भित्री सजावट लागि अक्सर crochet प्रयोग गरिन्छ। योजनाहरू वर्ग रूपांकनों विशेष गरी प्रसिद्ध डिजाइनर प्रयोग। तपाईं पनि असामान्य मग आफ्नो घर सजाउनु गर्न सक्नुहुन्छ। यो केवल यो कुरा लामो र कठिन छन् भन्ने देखिन्छ पहिलो नजर मा छ। निस्सन्देह, केही घन्टा एक कृति सिर्जना गर्न छैन।
कुनै पनि अवस्थामा, प्रक्रिया परिणाम गर्नुपर्छ। धेरै वस्तुहरू आंतरिक openwork crochet वर्ग रूपांकनों सिर्जना गर्न प्रयोग गर्नुहोस्। योजनाहरू कुनै पनि जटिलता चयन गर्न सक्नुहुन्छ। मनसाय को वैकल्पिक विविधता, यदि चाहनुहुन्थ्यो। गरेको यो बाटो मा जडान गर्न सकिन्छ के हेरौं।
पर्दे र plaid
वर्ग रूपांकनों कोठा मा कुनै पनि विन्डो सजाउनु गर्न सक्नुहुन्छ। रोचक fishnet पर्दे सान्त्वना थप्नेछ र ध्यान आकर्षित हुनेछ। तपाईं विशेष कुरा, बुनाई को यो विधि प्रयोग गर्न निश्चित कुरा सिर्जना गर्न चाहनुहुन्छ भने। विशेष देश घरमा यार्न नजर को पर्दा स्ट्राइकिङ्। वैकल्पिक, रंग मुद्दा प्रयोग गर्नुहोस्। एक टोन महान र स्टाइलिश देखिन्छ। को भित्री को रंग योजना ध्यान।
तकिया र कम्बल बेडरूम वा जीवित कोठा ठूलो साथै हुनेछ। सधैं, तातो कफी एक कप खन्याउन आफ्नो मनपर्ने चलचित्र मा बारी र नरम न्यानो कम्बल लुकाउन प्रसन्न। यस्तो कुरा को मनसाय बाट यो धेरै आकर्षक देखिन्छ। राम्रो भएको नसाहरू crochet कसरी calms सबैलाई थाह छ। योजनाहरू वर्ग रूपांकनों अंतर रहन्थ्यो गर्न सकिन्छ। यसलाई आफ्नो कौशल मा निर्भर गर्दछ।
तकियों को सोफा वा कुर्सी सजाउनु। विशेष आकर्षक तीन आयोमी बुनाई देखिन्छ। यस्ता कुराहरू indifferent जो कोहीले छोड्न छैन। तिनीहरूले आफ्नो प्रियजनलाई एउटा अद्भुत उपहार हुन सक्छ।
को मनसाय को बोलेरो
हरेक मानिसको दराज मा एक विशेष स्थान लिन बुनाई। यसलाई सधैं आरामदायक र न्यानो स्वेटर छ। वा fishnet कपडे र स्कर्ट। यो धैर्य crochet धेरै आवश्यक छ। योजनाहरू वर्ग रूपांकनों तपाईं वास्तविक masterpieces सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ। बोलेरो जस्तै हरेक Fashionista, दस आकर्षक वर्गहरूको सकिएमा जो। यस्तो कुरा कुनै पनि पोशाक वा ब्लाउज सजाउनु हुनेछ।
उत्पादन रंग कुनै पनि हुन सक्छ। तपाईं उज्ज्वल रंग संग परीक्षण डराउँछन् भने, त्यसपछि क्लासिक रंग मा आफ्नो रुचि रोक्न - कालो। उहाँले सधैं सुरुचिपूर्ण र महंगा देखिन्छ। तपाईं एक छोरी छन् भने, त्यसपछि उनको दराज एक स्त्री कुरा अद्यावधिक गर्न नबिर्सिनुहोस्। सुन्दर कुराहरू पनि सानो महिला को दराज हुनुपर्छ।
वर्ग रूपांकनों बनेको बैग
बुनना crochet वर्ग रूपांकनों योजना अंतर रहन्थ्यो कागज मा प्रस्तुत। वास्तवमा, हरेक needlewoman सजिलै आफ्नै विशेष मोडेल सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ। आखिर, त्यसैले ढाँचाहरू र नाजुक वस्तु नयाँ। यो यार्न उत्पादन भन्दा बढी सुन्दर केहि कल्पना गर्न गाह्रो छ। Crochet तपाईं सजिलो र अद्वितीय भित्री र दराज वस्तुहरू सिर्जना गर्न अनुमति दिन्छ।
तपाईं विषय वर्ग चाहनुहुन्छ भने आफ्नो झोला तिनीहरूलाई प्रयोग गर्नुहोस्। बुना सामान विशेष गरी मांग गर्दै छन्। व्यक्तिगत सधैं झोला सम्बन्धित looker। तपाईं लिंक गर्न स्वतन्त्र हुनुहुन्छ। वर्गहरूको एक अद्भुत सजावट हुनेछ। छैन आवश्यक नै ढाँचाको प्रयोग गर्नुहोस्। तत्व संयोजन तपाईं विशेष वस्तु सिर्जना गर्नुहोस्। यो एक मित्र वा प्रिय बहिनी एउटा उपहार रूपमा प्रस्तुत गर्न सम्भव सधैं छ।
आफ्नो प्रतिभा पूर्ण गर्न प्रयोग गर्नुपर्छ। अविस्मरणीय रूपांकनों आफ्नो घर सजाउनु। बुनना वस्त्र र कुनै पनि सामान। त्यसैले तपाईंले आफ्नो व्यक्तित्व देखाउन र संसारले आफ्नो रचनात्मकता प्रदर्शन गर्ने छन्। उज्ज्वल र flashy हुन नडराऊ। तपाईंको प्रविधी सुधार र तपाईं कसरी मनसाय देखि स्मरणीय वस्तुहरू सिर्जना गर्न सिक्न हुनेछ। तिनीहरूले एक वर्ग आकार मात्र होइन तर पनि, त्रिकोणात्मक परिपत्र र पनि बहु-faceted छन्।
हामी पैसा को लागि लिफाफें मा यसको गर्मी इम्बेड
नमुना सबै मुक्त नस्ल कपडाहरु
सबैभन्दा कपडा crochet: योजना, बुनाई सिद्धान्तहरू, आवेदन
चकलेट को जहाज - एक मास्टर वर्ग। मिठाई को जहाज - फोटो। मिठाई देखि जहाज कसरी
सुन्दर र व्यावहारिक सहायक - आफ्नो टाउको मा एक पट्टी। Crochet एक सानो कुरा बुनना गर्न सिक्नुहोस्!
विषय मा अनाज बनेको "शरद" समतल र तीन-आयामी लेख
को ताप quince के हो? असामान्य फल बारेमा रोचक जानकारी
सहर-करोडपति अमेरिकी जनसंख्या र रोचक तथ्य
रोचक शाही कुकुर के हो? उहाँले बलियो, आत्म-पर्याप्त र nobly सुन्दर छ भन्ने तथ्यलाई
म कच्चा zucchini खान सक्नुहुन्छ? गर्मी उपचार बिना यी तरकारी प्रयोग धेरै व्यञ्जनहरु
कसरी एउटा फाइल मा फाइलहरू संयोजन गर्ने?
व्याध - यो पेशामा लागि हो? अधिकार र रेंजरों को कर्तव्य
को PS3 मा "GTA 5" मा कोड। सूची।
उत्तर ओसेसियन Name राज्य मेडिकल एकेडेमी: इतिहास, विभाग, भर्ना नियम
Blount रोग: घर मा उपचार
टर्की, Kemer, होटल "Rixos"। होटल "Rixos प्रिमियम Tekirova" होटल "Rixos Beldibi" होटल "Rixos Sungate": समीक्षा, फोटो
कसरी केटा को लागि फिट बनियान कुरा: दुई मोडेल फोटो, वर्णन र चित्र संग
जेनेभा कन्वेंशन: दयालु युद्ध को सिद्धान्त